XZ420E HDD bụ ngwaahịa ọhụrụ nke setịpụrụ teknụzụ dị elu, ahụmịhe onye ọrụ, arụmọrụ nke ihe owuwu n'ozuzu ya, ma na-etinyekwu uche na ihe owuwu chọrọ, omume arụmọrụ, nchekwa nchekwa usoro, enwere ike iji ya rụọ ọrụ na pipeline pipeline dị ka ike eletrik, nkwukọrịta, USB TV na na na.
Isi nkọwa nke ngwaahịa a
1.The otu-njikwa haịdrọlik akara pilot usoro na-enye ala arụmọrụ arụmọrụ na mgbanwe ukpụhọde arụmọrụ maka dum igwe. A na-ahọrọ ngwongwo hydraulic nke mbụ na-ahọrọ iji hụ na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke usoro igwe hydraulic niile.
3.High-speed sliding systems, pistin moto iji nweta elu na ala eji ọsọ nke e ji ebu ihe, na-amụba ikike imeghari igwe ọrụ ọnọdụ, na-akwalite arụmọrụ arụmọrụ.
Igwe ahụ dum na-eji teknụzụ nchedo dịka ngbanye nke eriri na-achịkwa, ngbanwe oche, mgbagha mgbagha, nchedo ọkụ eletrik na, obere oge gbakwunyere 20% ike, na-ezute ihe asambodo nchekwa nchekwa CE.
5.Sliding, n'usoro usoro otutu mmepụta, modular nkịtị okporo ígwè mmanụ ụgbọala usoro na electronic akara modul, usoro ike ịzọpụta, elu arụmọrụ nke ewu, arụmọrụ mụbara site 15%.
6.Support iche iche mkpa nke ndị ahịa, na igwe nwere ike na-abawanye na tagzi, ikuku conditioner, oyi mmalite, apịtị antifirizi, akpaka loading mkpanaka, eletriki ujo nchedo akpaka eri mmanụ daub wdg, belata na-arụ ọrụ ike, mma na-ewu arụmọrụ.
Atụmatụ Okwu Mmalite nke XZ420E HDD
Engine China Ⅲ nke III na China
400L L Mud apịtị 400L apịtị mgbapụta
450L L Mud apịtị 450L apịtị mgbapụta
Apịtị antifirizi apịtị apịtị friji
Mbat ihicha apịtị ihicha
Pipe Ibu Ibu
Ọkara akpaka pipeloader nke ọkara akpaka njikwa ngwaọrụ
Akpaghị aka loading Full-akpaka pipeloader
Tagzi Mfe wụsịrị Mfe igwe tent
Cab (oyi na-ekpo ọkụ) Cab na ikuku conditioner
Igha ije Line Control ije
Ije ije na-ejikwa waya,
Obere oge gbakwunyere 20% ike
Ọdụdọ ujo eletriki
Akpaghị aka tinye eri mmanụ Akpaka eriri mmanụ daub
XZ420E HDD igwe na-amalite mgbe esonyere ndepụta nchịkọta, gụnyere akwụkwọ ndị na-esonụ:
Product Asambodo / Product Manualn / Engine nkọwapụta / Engine Akwụkwọ ikike / Mbat mgbapụta Ntụziaka Manual
Nke gara aga: XZ400 kwụ Directional Drilling rig
Osote: XZ450Plus kwụ directional mkpọpu ala rig
Hdd rig igwe
XZ1350 kwụ directional mkpọpu ala rig
HDd mkpọpu ala igwe, Kwụ Directional Drilling rig, borehole mkpọpu ala igwe, HDd rig,